AGG ndiye vemarudzi akasiyana-siyana Company vakaomerera design, gadzira nokuparadzirwa Power chizvarwa gadziriro uye yemhando Energy solutions.Backed ne kunze nyanzvi munyengeri rutsigiro yemunyika, AGG Power ndiye zvizivikanwe rubatsiro munyika yose dzave akatendeuka kuti akavimba uye yakavimbika kure simba zvitengeswa .
Zvakaitika kwedu kushanda dzaishandisa huru, dzakadai Telecoms indasitiri, akatitungamira kuti kugadzira refu kumhanya chinotsva Matangi pamwe akawedzera kuchengeteka mupfungwa.
We zvakagadzira mwero siyana 500 uye 1000 triomphe matangi, kana kuroorwa kana kaviri akavakirirwa. Nekuti vose ane zvinodiwa zvakasiyana, zvedu nyanzvi mainjiniya kunogona gadzirisa chipiriso chedu kusangana nomumwe zvinodiwa zvenyu.
Kuburikidza indasitiri kutungamirira kuzvidzora gadziriro kupa kure kukurukura Mabhokisi, isu ukwanise kuongorora uye kuzvidzora kwako midziyo kubva kuhofisi kana apo parwendo.
Vazhinji control panel Mabhokisi zvino inoratidza smartphone Apps zvinopa mukana mumwe jenareta yakatarwa parameters uye tanga Notifications chero nyaya pamusoro site.Advance ruzivo nyaya inoita kuti kupa zvakakodzera zvekuvaka, achiponesa watambisa kushanyira uye pakupedzisira, mari.